Galmee Afaanii filuu
Afaan galmee keef filatte kuusaa jechootaa too'ata qubeeffannoof fayyade, waa dhugoomsuu fi murfisa, kurnayee fi dhangessaa kumootaa fayyade fi dhangii mahaalaqa durtii murteessa.
Afaan filatte galmee hundaaf fayyada.
Galmee keessatti, akkaataa keewwata kamuufuu afaan gargarbahe fayyadamuu dandeessa. Kun dursa afaan galmee hundaa irra qaba.
Keewwata tokko keessatti kutata barruu filatameef yoo barbaadde kalatiin dhangeessuun ykn akkaataa arfii waliin afaan tokko ramaduu nidandeessa. Ramaddiin kun akkaataa keewwataatii fi afaan galmee irratti durtii qaba.
Galmee hundaaf afaan filuu
Afaanota durtii galmeefjalatti, galmeewwan haaraa uumaman hundaf afaan galmee fili. Yoo Galmee ammee qofaaf tiif mallattoo keesse, filannoon kee galmee ammee qofaaf fayyade. Qaaqa OK wajjin cufi.
Akkaataa keewwataaf afaan filuu
Akkaataa keewwata ittiin gulaaluu barbaaddu qaree keewwata keessa kaa'i.
Baafata halqaraa baniitii Akaataa Keewwata Gulaaluu fili. Kuni qaaqa Akkaataa Keewwataa bana.
Keewwatoonni hindi akkaataa keewwata ammee wajjin dhanga'e afaan filatame qaba.
Barruu filatameef kallattin afaanitti gargaarami.
Afaan fayyadamuu barbaadduuf afaan fili.
Dhangii - Arfii fili. Kun qaaqa Arfii bana.
Kaalki LibreOffice, Dhangii - Seelootaafiliitii akkaataa sanan itti fufi.
Akkaataa arfiif afaan filuu
Maqaa akkaataa arfii afaan adda addaa fayyadamuu barbaaddee irratti cuqaasi.
Amma akkaataa arfii barruu kee filatameef fayyadamuu dandeessa.
Afaanota Barruu baay'ee ida'uu
Galmeewwan jechootaa akka dheertootti dhiyeessuu fi ijaaruu. Meeshaalee - Afaan - Galmeewwan jechoota Baay'ee Karaarra fili fuula galmeewwan jechootaa iyyaafataa saphaphuu durtii keessaa banuuf.
Tarree ibsootaa keessaa galeeloo fili. Ibsa galeeloo argachuu barbaaddu keessatti mataduree cuqaasi.
Fuula itti aanu keessatti, sajoo Get It cuqasi dheertoo galeeloo naqachuuf. Yaadachiisa maqaan ukaankaa kan iyyaafataan kee faayilii naqatuudha. Galaaleewwan dabalataa akka barbaadetti naqadhu.
LibreOffice keessaatti, Tools - Extension Manager filiitii Idaatii cuqaasi dheertoowwan naqataman ijaaruuf.
Dheertoowwan erga ijaartee booda, LibreOffice (Kaasaa Ariitii dabalatee)cufiitii, lamkaasi.
Afaan UI Ijaaruu
Ijaarsii durtii mosajjii OpenOffice.org dhaan walquunnama fayyadamaa (UI) kan afaan ati filattee siif laata.
Fayyadamoonii hedduun fooyya'aa Ingiliiffaa Ameeriikaanii isa ajajoota baafata Ingiliffaa fi gargaartu fayyadamaa Ingiliffaa isa siif laatu filatu. Baafatootaaf afaan kabiroo yoo barbaadde, afaan UI akka armaan gadiitti jijjiiri.
Saanduqaa tarree kana "Walquunnama fayyadamaa" keessaa afaan Ui kabiroo fili.
Yoo saanduqii tarree afaan ati abarbaaddu siif hintarreesine, "Afaanoota UI Dabalataa Ida'uu" ilaali.
Afaanoota UI Dabalataa Ida'uu
Mosajjii LibreOffice cufi (akkasumas Ariitiin kaasaa yoo kaa'a tahe cufi).
Qarqaba afaanii isa sirri fooyya'aa kan mosajjii LibreOffice filitii naqadhu.
Dhangii - Arfii - Bocquu
Title is: Galmee Afaanii filuu